Must have softwares for your PC — MYSTERY ZILLION
Must have softwares for your PC
September 2008 edited March 2010 in File Request
ကျွန်တော် Thread အသစ်တခု ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကွန်ပျူတာအတွက် မရှိမဖြစ်လို ဆိုရမဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ software တွေကိုတင်ပေးသွားပါမယ်။ မိမိအလိုရှိတဲ့ software များကိုလဲ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ တခြား member များ မိမိတင်ပေးချင်တာတွေကိုလဲ တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ zshare ကနေ အထိက တင်ပေးမှာပါ။ ဘန်းကျော်ကလူများ မိမိတို အဆင်ပြေမဲ့ hosting များကိုလဲ ပြောနိုင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပေးမဲ့ software အားလုံးဟာ Full version ပါ။ Crack , Serial , Keygen တွေ တပါထဲ ပါပါတယ်။
အခု ပထမဆုံး စတင်မှာကတော့ File Upload software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ mediafire & zshare အပါအဝင် file hosting ပေါင်း 48 ခုနှင့် Image hosting ပေါင်း 15 ခုကို multiple upload တင်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်လဲ အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Uniblue ကထုတ်တဲ့ DriverScanner ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်စမ်းတာတော့ ရှိသမျှ Driver အားလုံး တခုမကျန် ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ internet ကြီးတော့ ရှိဖိုလိုသပေါ့နော်။ ပြီးတော့ driver တွေကို backup လဲလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Name-Uniblue Driver Scanner 2009
ဒါကတော့ ဘယ်တော့မှ မရိုးမဲ့ winrar 3.70 Final Corporate ပါ။ No serial , keygen & patch need. Already Cracked version.
Version-3.70 Final Coporate
ဘန်းကျော်က စိတ်ပျက်ဖွယ် connection များအတွက် ဒီ Software လေးက တကယ် အသုံးဝင်မှာပါ။ Speed Connect လိုခေါ်ပါတယ်။ Internet connection ကို တကယ် boost လုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့ ကျွန်တော် ဘန်းကျော်မှာတုန်းက Dial-up ကို ဒါလေးသုံးပြီး Download ဆွဲတာ 35 KB ထိရပါတယ်။ Speed Test မှာဆို 40 KB ထိရပါတယ်။ အဲ့ ဖုံးလိုင်းလေးတော့ ကောင်းရမှာပေါ့နော်။ ဒါလေးကတော့ latest version ပါ။
ဒါလေးကတော့ ဖြုတ်မရအောင်ဒုတ်ခ ပေးတဲ့ software များအတွက် Your Uninstaller Pro Latest Version ပါ။ ဒါတင်မကပါဘူး တခြား features တွေလဲ အများကြီးပါပါတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
Name-Your Uninstaller Pro
ဒါလေးကတော့ kaspersky key အတွက် အမြဲဂေါင်းခြောက်နေရသူများ အတွက် kaspersky key finder လေးပါ။ Run လိုက်တာနဲ့ နောက်ဆုံးထွက် kaspersky keys တွေကို အလိုအလျှောက်ရှာပေးမှာပါ။ Server5ခုရွေးလိုရပါတယ်။ အဲ့ဒိထဲမှာမှ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ဒေါင်းလိုက်ယုံပါပဲ။ အသုံးဝင်မယ်လို မျှော်လင့်ပါတယ်။
Name-Kaspersky Key Finder
ဒါလေးကတော့ ကိုယ်အရေးအကြောင်း သွားရင်းလာရင်းနဲ့ recovery လုပ်ဖိုလိုလာရင် သုံးဖိုပါ။AusLogics_Emergency_Recovery Portable Version ပါ။ Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
ွှ့Nokia PC suite 7.0.8.2
Name-Nokia PC suite 7.0.8.2
ဒါလေးကတော့ ဗေဒင် software ပါ။ စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
Name-Prophet Astrology Software 2008.rar
Thanks friend, Kaspersky Key Downloder Software may extremely useful for me.
I appreciate your share friend ... :5:
ဒါလေးကတော့ Defrag software အတွက် ခေါင်းကိုက်နေသူများ အတွက် Ultimate Defrag 2008 Full Version ပါ။ Vista မှာဆိုရင် build-in defragment software ကတကယ် ကြာပါတယ်။ ဒါကတော့ မယုံနိုင်အောင်ကို မြန်ပါတယ်။ Enjoy it
Name-Ultimate Defrag 2008
ဒါလေးကတော့ spyware software တွေထဲမှာ အမြဲ အကောင်းဆုံးလို သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Spyware Doctor Latest Version ပါ။ Enjoy it. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က တင်သာတင်ပေးနေရတာ ၊ ဒေါင်းတဲ့လူများ အဆင်ပြေမပြေ၊ အသုံးဝင်မဝင်လေး သိပါရစေ ခင်ဗျား။ ကျေးဇူးပါ။
Name- Spyware Doctor
ကျွန်တောလည်း အူဘွန်းတူ ဒုက္ခပေးလို့(အမှန်က ကျွန်တော်အသုံးမကျလို့ ) ရှိတာလေးတွေ ပြောင်သွားပြီ။ အခုမှ ပြန်ရှာနေရတာ။ အခုလို ကီးပါမကျန် ရှာပြီး တင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ...
ဒါလေးကတော့ ကြိုက်တဲ့ Window Xp တင်ပြီးရင် Double Click လိုက်တာနဲ့ Activation ဖြစ်သွားမဲ့ Windows Genuine XP Activation Key ဖိုင်လေးပါ။ ကျွန်တော် တခြား post မှာတင်ပြီးပါပြီ။ တစုထဲ ဖြစ်သွားအောင် ပြန်တင်လိုက်တာပါ။
Name-Windows Genuine XP ActivationKey
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုရဲမာန်။ အခုလို အသုံးဝင်တာသိရတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။:d လိုအပ်တာများရှိရင်လဲ တောင်းနိုင်ပါတယ်။ :101:ကျွန်တော် ရအောင် ရှာတင်ပေးမှာပါ။ :67:
Banner Maker Pro7ကို full version လေးလိုချင်လို့ပါ ကိုတက်လူ ခင်ဗျာ...
ခဏလေး စောင့်နော်။ တင်ပေးနေပြီ။:67:
ကဲ ရပါပြီဗျား။ ကိုကျော်မင်း အတွက်ပါ။
Name-Banner Maker Pro
Info Error Fixed & Link Updated
Great Share!!!! Brother! Thank you so much!
ဒါလေးကတော့ မိမိကွန်ပျူတာကို သူများသုံးတဲ့အခါ ကိုယ်ပေးမသုံးစေချင်တဲ့ software တွေရှိရင် protect လုပ်ထားနိုင်မဲ့ exe password protector လေးပါ။
Exe Password lets you protect any EXE file with its own password. It does this by storing the password directly in the EXE file. It isasimple matter to addapassword toafile: Just select the desired file on the desktop, in the start menu or in Explorer, open the context menu by right-clicking, select Password protection, enter the password, and youвЂ™re done. From that time on,apassword will be required to run the EXE file.
Protecting an exe file is easy:
1.) Choose the context menu (right mouse click) and select password protection.
2.) Exe Password opens and you can enterapassword for EXE.
3.) Finished! вЂ“ the EXE-file is now password protected!
1.)run the setup and install
2.)use the keygen to activate use any name you want
Hiren_s_BootCD နောက်ဆုံးထွက် Version 9.5 လိုချင်သူရှိရင် ကျွန်တော်တင်ပေးပါ့မယ်။ ဖိုင်ဆိုက်က နဲနဲကြီးလို မေးရတာပါ။ 95M ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ Hiren_s_BootCD နောက်ဆုံးထွက် Version 9.5 တော့မရှိပေမယ့် ၉.၁ ရှိပါတယ်။အသုံး၀င်ကြမယ်ထင်လို့တင်ပေးလိုက်တယ် ကိုတက်လူရေ။
Download Hiren_s_BootCD_9.1.rar :67:
နောက်လိုတာရှိရင်လည်း အကူအညီတောင်ဦးမယ်နော်...:d ..:d...
ဘယ်လို crack ရတာလဲမသိဘူး...ကျွန်တော့်ကို trial version ပေးတယ် ။ ဘယ်လို လုပ်
အကိုရေ။ crack ကလွယ်လွယ်လေးပါ ခင်ဗျ။ crack folder ထဲမှာ ရှိတဲ့ bannermaker.exe & cim.nfo.viewer.exe ဆိုတဲ့ File နှစ်ခုကို C: အောက်က banner maker pro အောက်မှာ copy & paste လုပ်ပေးလိုက်ယုံ ပါပဲခင်ဗျ။ အမှန်ကတော့ over write လုပ်လိုက်တာပါ။ ဒါဆိုရင် Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။
ကိုထွက်ပေါက်ကြီး။ ကျေးဇူးနော်။ ဒါဆို ကျွန်တော် တင်မပေးတော့ဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ...ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာပါပဲ......မရလို့ ကိုတက်လူကိုမေးတာပါ....
နောက်တစ်ခေါက် intall ပြန်လုပ်ကြည့်အုံးမယ်ဗျာ....
ကိုတက်လူရေ.. ကောင်းလိုက်တဲ့ အစီအစဉ်ဗျာ.. ကွန်နက်ရှင် သိပ်မကောင်းလို့ နောက်မှပဲ တင်တော့မယ်...
အကိုရေ။ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Sorry ပါနော်။ အခု ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်တင်ပြီး စမ်းလိုက်ပါတယ်။ Crack ဖိုင်အသစ် တခုပါပြန်ရှာလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသွားပါပြီ ခင်ဗျ။ အောက်က Crack ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် အရင်လင့်အောက်မှာလဲ မကြာခင် update ပြန်လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။
အခု အစ်ကိုတင်ပေးတဲ့ crack လေးနဲ့
mz စည်းကမ်းအတိုင်းမမေးခင်ရှာဆိုလို့ ရှာလိုက်တာမတွေ့တော့လို့တောင်းလိုက်ပြီနော်....
VCD cutter လေးလိုချင်လို့ ခင်ဗျာ...
honeybaby wrote: »
ဒီမှာပါ honeybaby ရေ....
VCD Cutter Pro 4.16.6
ကို ဂူးဂူးရေ။ ကျေးဇူးနော် ။ ကျွန်တော် မအားလို ကူညီပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။
plz help me4my mobile motorola v3i software for skin, thzalot
Glock wrote: »
အကိုရေ ကျွန်တော် သိပ်မရှင်းလိုပါခင်ဗျ။ အကိုလိုချင်တာ ဘယ်လို software လဲမသိဘူး။ skin software လား? နဲနဲ သေသေ ချာချာလေး ရှင်းပြပါခင်ဗျ။
thz alot ko exiter. thz u so much:67:
ကို googooster ရေ
zshare လေးနဲ့ပေးပါလား ကို googooster ရေ
ရပြီဗျီု့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :77:
ကျွှန်တော် noiseware လေးလိုချင်လို့ ဗျာ
ကိုယ်ဟာကို ရှာတာ တိုင်ပတ်နေလို့
ကဲ ဒီမှာရပြီနော် အကို။ Crack ပါ ပါပါတယ်။
Hello Ko Tet Lu
My com have formatted. So I need some software. Can u help me? These software are needed;Total Video Converter, Power DVD, Ulead Video Studio and Spy Emergancy 2008.
Previously thank for ur help. And Additionally, I wanna ask u one thing, How can I add emotional icons?
အမရေ။ software တွေကတော့ ကျွန်တော် upload လုပ်နေပါပြီ။ အဲ့ အမပြောတာ post မှာ smiles လေးတွေထဲ့ချင်တာ ဆိုရင်တော့ post ကို တင်တဲ့အခါမှာ ဘေးမှာ smiles လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို ကလစ် လိုက်ရုံပါပဲ။:67::67:
this is ccproxy 6.3.7 and it include crack and how to setup ccproxy internet sharing. My knowledge and my style. very portable and efficient.
I am using this site since 2002. www.9down.com
I gotalot from this site and it is very good site for software hardware and latest news but now bagan was blocked and MPT ipstar users can access. there'sagood one too is file hippo http://www.filehippo.com/
There arealot left I know but most of them are blocked by both of them.
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် လုပ်တာ activition key လာတောင်းနေတယ်ဗျ. full version မရဘူးဖြစ်နေတယ်. patch file ကိုလဲလုပ်ပြီးပါပြီ.. patch လို့မရဘူးလို့ပြောနေပါတယ်..ကူညီပါအုံးဗျာ..........
samelann wrote: »
အကိုရေ Read me ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးထဲမှာ ကီးရှိပါတယ် ခင်ဗျ။ ဖွင့်လိုက်ပါ။ ကီးတော့ ကျွန်တော် ဒါရိုက်မတင်ပေးတော့ဘူးနော်။ ပြသနာ ဖြစ်မှာဆိုးလို။
တော်တော် လေး ကောင်း ပါ တယ်........
နောက်ထပ် ရှိ သေး ရင် မျှ ပါ အုံး အ ကို ရေး..........:d